Fomba fijery momba ny fahazazana
Jeografia Urban Geography
by Amanda Briney, mpanoratra miasa
Ny lohahevitra mifehy ny fanombanana sy ny fiantraikany eo amin'ny Core Urban
Ny fitrandrahana dia voafaritra ho dingana izay ahafahan'ny olona manankarena (manerantany miditra amin'ny ankamaroan'ny olona) mivezivezy, manamboatra ary mamerina trano ary indraindray orinasa any amin'ireo tanàna am-bohitra na faritra hafa miharatsy taloha teo aloha ho an'ny mahantra.
Noho izany dia misy fiantraikany amin'ny demografika amin'ny faritra ny fanasitranana satria mitombo ny isan'ireo olona vitsy an'isa ara-pirahalahiana ary mitombo ny vola miditra sy ny fianakaviana.
Ankoatra izany, mihena ny habaka ao an-trano satria ny fianakaviana fidiram-bola ambany dia hosoloin'ny tanora tokan-tena sy ny mpivady izay maniry ny hanakaiky kokoa ny asany sy ny asa ataony any am -piandohana an-drenivohitra .
Ny tsenam-barotra dia miova ihany koa rehefa misy ny fanentanana satria mihabetsaka ny vidin'ny trano sy ny vidin'ny trano. Raha vantany vao mitranga izany, dia matetika miditra amin'ny trano fonenana na trano fonenana azo vidiana amin'ny vidiny. Ho fiovana amin'ny fananan-tany, dia misy koa ny fampiasana ny tany. Talohan'ny fananganana izany faritra izany dia matetika ny trano fonenana ambany ary indostria indraindray. Aorian'izay dia mbola misy trano ihany fa matetika no misy farany, miaraka amin'ireo birao, varotra, trano fisakafoanana ary fialamboly hafa.
Farany, noho ireo fiovana ireo, dia misy fiantraikany amin'ny kolontsaina sy ny toetr'ilay faritra ny fanetren-tena, ka mahatonga ny fanamafisana orina ny adihevitra.
Tantara sy antony nahatonga ny zenetika
Na dia nahazo diplaoma betsaka aza ny jono vao haingana, dia notontosaina tamin'ny 1964 ny mpahay siansa Ruth Glass. Niara-niasa taminy izy mba hanazava ny fanoloana ny olona miasa any amin'ny lise na any amin'ny lise any Londres.
Hatramin'ny nanombohan'i Glass ny fe-potoana, maro ireo ezaka natao hanazavana ny antony mahatonga ny fanentanana. Ny sasany amin'ireo fanandramana voalohany indrindra hanazavàny izany dia amin'ny alalan'ny teoria andalam-pamokarana.
Ny teoria mitovitovy amin'ny sehatry ny famoronana dia mifandraika amin'ny geographer, Neil Smith, izay manazava ny fanentanana mifototra amin'ny fifandraisana eo amin'ny vola sy ny famokarana. Nilaza i Smith fa ny vidin'ny trano fialan-tsasatra any amin'ny faritra ambanivohitra taorian'ny Ady Lehibe II dia nitarika ny hetsiky ny renivohitra ho any amin'ireo faritra izay manohitra ireo tanàna anaty. Vokatr'izany dia nilaozana ny toerana an-tanan-dehibe ary nihena ny lanjan'ny tany raha nitombo ny lanjan'ny tany any ambanivohitra. Avy eo i Smith dia niakatra niaraka tamin'ny teorinan'ny toetr'andro ary nampiasany izany mba hanazava ny fizotran'ny fanetren-tena.
Ny teorinan'ny toetr'andro dia manoritsoritra ny tsy fitoviana eo amin'ny vidin'ny tany amin'ny fampiasana azy ankehitriny ary ny mety ho vidin'ny landy dia mety ho azo ampiasaina amin'ny "fampiasana avo kokoa sy tsaratsara kokoa." Nampiasa ny teoriany i Smith, ka nanamafy fa rehefa tsy nisy ny banga Raha ny tena izy, ny mpikaroka dia mahita ny tombony mety amin'ny fanarenana ny tanàna anatiny. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanarenana any amin'ireny faritra ireny dia manakatona ny faran'ny trano fisakafoanana, mitarika ho an'ny trano fonenana avo lenta, ny fampindramana, ary ny hetra. Noho izany, ny fitomboan'ny tombom-barotra mifandray amin'ny teoratr'i Smith dia mitarika amin'ny fanentanana.
Ny teoria teolojika mifototra amin'ny tsimok'aretina, izay nolazain'ny mpahay jeografia David Ley, dia mijery ireo toetra mampiavaka ny olona sy ny zavatra atahorany rehefa manohitra ny tsena ny fanazavana.
Voalaza fa ireo olona ireo dia manao asa fanitarana (ohatra dokotera sy / na mpisolovava), mankafy zavakanto sy fialam-boly, ary mitaky fialamboly ary mahaliana ny etetika ao an-tanànany. Ny fitrandrahana dia mamela ny fanovana toy izany hitranga ary haka an'ity vahoaka ity.
Ny dingan'ny fanamafisana
Na dia toa tsotra aza dia misy ny fanentanana ho toy ny dingana iray izay manangona haingana manan-danja amin'ny fotoana. Ny dingana voalohany ao anatin'ilay dingana dia ny mpisava lalana an-drenivohitra. Ireo no olona mivezivezy any an-toerana miaraka amin'ny mety ho fanarenana. Ireo mpisava lalana an-drenivohitra dia matetika mpanakanto sy antoko hafa mandefitra ny olana misy ifandraisany amin'ny tanàna anaty.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanampy tamin'ny fanavaozana sy ny fametrahana ny "fandefasana" ireo faritra ireo. Rehefa vita izany dia mitombo ny vidin-tsakafo ary ny vidim-piainana ambany dia misy ny vidin'ny vola miditra sy miditra amin'ny olona miditra sy ambony.
Ireo olona ireo dia mangataka fanamafisana bebe kokoa sy trano fonenana sy orinasa miova mba hanolotra azy ireo, hananganana ny vidiny indray.
Ireo fiakaran'ny vidin-tsolika ireo dia manery ny mponina sisa tavela amin'ny fidiram-bola madinika ary ny ankamaroan'ny olona miditra sy miditra dia mahazo tsindrona, manohy ny fizotran'ny fanetren-tena.
Ny fandaniana sy ny tombontsoa amin'ny fampandrosoana
Noho ireo fiovana goavana ireo eo amin'ny manodidina, dia misy lafiny tsara sy ratsy ho an'ny fanetren-tena. Matetika ny mpitsikera no manambara fa ny fandrosoana ara-barotra sy ny toeram-ponenana ao amin'ny faritra iray dia lehibe loatra aorian'ny fanarenana. Vokatr'ireny fananganana goavam-be ireny, dia misy ny fahaverezan'ny maha-olona an-tanandehibe an-tanandehibe ary ny faritra afovoan-tany dia lasa monokom-bary mahavariana miaraka amin'ny haavon-tsarety izay tafaray. Misy ihany koa ny ahiahy fa ny fivoarana goavam-be dia mety misy trano manan-tantara any amin'ny faritra.
Ny fanakianana lehibe indrindra amin'ny fanentanana dia ny famindrana ny mponina tany am-boalohany voaova. Hatramin'ny toerana efa voafaritra dia matetika any amin'ny foibe an-drenivohitra no misy ny vola midadasika amin'ny vola miditra, ary indraindray dia tsy misy toerana aleha. Ankoatra izay, ny rojo sy ny serivisy, ary ny tambajotra sosialy dia sarotra ihany koa ary nosoloina farany amin'ny varotra ambony sy serivisy farany. Izany lafiny amin'ny fanentanana izay mahatonga ny fifandonana mafy eo amin'ny mponina sy ny mpandraharaha.
Na eo aza ireny tsikera ireny, misy tombony maromaro ny fanetren-tena. Satria matetika no mitarika ny olona hanana trano ny olona fa tsy manofa, indraindray dia mety hiteraka fahasamihafana bebe kokoa ho an'ny faritra izany.
Izy io koa dia mitaky fitomboan'ny fangatahana trano honenana satria misy ny fananana tsy dia misy vidiny. Farany, nilaza ny mpanohana ny fanamafisana fa noho ny fisian'ireo mponina ao afovoan-tanàna, ny fandraharahana dia mandray soa satria misy olona maro mandany ao amin'ilay faritra.
Na dia heverina ho tsara na ratsy aza anefa izany, dia tsy isalasalana fa lasa faritra manan-danja amin'ny tanan-dehibe manerana izao tontolo izao ny faritra voajanahary.
Tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritra any Etazonia
Mianara momba ny Modely Von Thunen
The Geography Interest of London
Ny fototry ny District Business District
Fambolena an-tanàn-dehibe - Ny hoavin'ny fambolena?
Volana voavidy - Dollars sy ny sendikà
Fitaterana momba ny fitaterana
Tranon'ny tanànan'i Québec
Tanànan'i Etazonia maro dia mahita hantsana goavam-be ao amin'ny Daily Daily
Fanavakavaham-bolokoditra sy fifandraisana
Calpulli: Ny Fikambanana fototra fototra an'ny Aztec Society
4 Free GED Prep Classes ho an'ny olon-dehibe
Cats and Humans: fifandraisana ara-piraisana 12.000 taona
Manao Fitafy ho an'ny Rugby: Ny tongony sy ny sorony
Mampiofana Toe-tsaina ve ny Fampiofanana ny Mpiasan'ny Bodybuilding sy ny Mahaiza Manana?
Momba an'i Taliesin West, Architecture any Arizona
Makà fitsangatsanganana an-tsambo eto an-tany
Ahoana ny fiasan'ny TNT Pop Its Snappers
Dingana ho an'ny manjaka manomboka kisendra
Ahoana ny fampiharana ny makia fototra ho an'ny dingana
Ny Top 10 Mozika fitaovana ho an'ny mpianatra
Revolisiona Amerikana: Battle of Bunker Hill
Fomba hamakiana tabilao amin'ny sari-tany
Pitzer College Admissions
Yeston sy Kopit's "Phantom: The American Music Sensation"
Toro-hevitra momba ny zana-tsoratry ny Sekoly Alahady
Yellowknife, Renivohitry ny Faritanin'i Northwestwest
Universities Publications Ny ankamaroan'ny mpianatra mpianatra 20 - 25 amin'ny ACT
Iza moa i Bill France, Andriamatoa ary Nahoana Izy no Nanomboka ny NASCAR?
Vanim-potoanan'ny Majorana any Canada miaraka amin'ny lisitry ny Province
Trano Fianakaviana ao Pompeji - Toeram-ponenana mamy indrindra ao Pompeii
Fanelanelanana - (toherina)
Ny famaritana sy ny hevitry ny Melody